Analytics momba ny varotra mialoha amin'ny ThinkVine | Martech Zone
Analytics momba ny varotra mialoha amin'ny ThinkVine
Alatsinainy, Novambra 2, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Inona no atao hoe Return on Investment raha afaka manova ny varotra varotrao ianao?
Ity dia fanontaniana iray apetraky ny mpanjifa lehibe manana paikady marketing sarotra (izay mahay mandanjalanja eo amin'ireo mpanelanelana maro) isan'andro isan'andro. Tokony handefa radio amin'ny Internet ve isika? Tokony hanova ny marketing amin'ny fahitalavitra ve aho? Inona no ho fiantraikan'ny orinasako raha manomboka mivarotra an-tserasera aho?
Matetika, ny valiny dia tonga amin'ny alàlan'ny fanandramana marobe sy dolara very amin'ny marketing. Mandrak'izao. Ireo mpivarotra dia nampiasa ny zava-bita taloha mba haminavina ny fahombiazan'ny marketing amin'ny ho avy. Misy risika lehibe aterak'izany satria ampiana mpanelanelana vaovao rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra iray kely fotsiny ny fanovana ny classifieds avy amin'ny gazety mankany amin'ny Internet. Raha nanohy nandany ny sarany voasokajy ianao nefa tsy nanova azy ireo an-tserasera, dia tsy ho tonga amin'ny fetra farany ambony ianao. Raha ny marina dia mety handany ny volanao fotsiny ianao.
ThinkVine efa niasa tamina scenario "Ahoana raha" efa ho folo taona izao. Mahagaga ny mpanjifan'izy ireo… Sunny Delight, SC Johnson, LegalZoom, Del Monte, Hershey, ary Citrix Online.
ThinkVine dia mahavita manao izany amin'ny alàlan'ny rafitra fanodinana modely mifototra amin'ny agents izay novolavolaina tamin'ny taona 1940. Amin'ny alàlan'ny fahatakarana ireo fizarana an-tsena izay nividy taminao tamin'ny alàlan'ny fampitaovana tsirairay sy ny fampiharana ny maodely amin'ireo ampahana amin'ny haino aman-jery hafa, ThinkVine dia afaka manangana modely mialoha ny amin'ny fomba fiasan'ny varotrao amin'ireo haitao hafa ireo. Rafitra iray io.
Ireo scenario izay novolavolain'i ThinkVine dia azo ampiharina amin'ny fotoana maharitra, fotoana fohy ho an'ny marketing ara-potoana, ary ezaky ny varotra mifototra amin'ny sehatra. Afaka maminavina ny scenario farany aza i ThinkVine… ahoana raha najanonao daholo ny marketing!
Mianara bebe kokoa amin'ny alàlan'ny fitsidihana vokatra an'ny rindrambaiko ThinkVine's Simulation Marketing and Software.
Fampahafantarana feno: Izaho sy ny CEO CEO Damon Ragusa dia niara-niasa tamin'i Bruce Taylor avy ao Praesage taona maro lasa izay hampiharana fomba mitovy amin'izany amin'ny varotra mailaka mivantana. Damon dia nanangana maodely statistika mavitrika avy amin'ny mombamomba ny mpanjifa ary, amin'ny alàlan'ny automatisation an'i Bruce, azontsika atao ny mandeha ho azy amin'ny fampiharana ireo maodely ireo amin'ny angon-drakitra prospect. Nantsoina hoe Prospector ilay fampiharana ary niasa tamim-pahakingana. Bruce dia nandahatra tsara ny fampiharana nandritra ny taona maro ary mbola mampiasa azy io ho an'ny mpanjifa marketing mivantana marobe.
Tags: vinavinavinavina Analyticsvarotra mialohamisaina
3 Nov 2009 amin'ny 3:28 maraina
Doug, karazana tantara momba ny fividianana inona no mila vitan'ny ThinkVine hahavita izany? Azon'izy ireo atao ve izany ho an'ny orinasa vaovao / fanombohana?
3 Nov 2009 tamin'ny 3:57 PM
Tena mila angona data io. Heveriko fa raha toa ka nanana mpanjifa ampy izy ireo, dia azo atao ny manangona mombamomba. Tsy isalasalana fa hankasitraka izany ny mpanjifany! Mieritreritra aho fa mampiasa angona 1 taona farafahakeliny izy ireo - heveriko fa 2 no atolotra.